ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်ခြင်း(၁)နှစ်ပြည့်အလှူလုပ်ပြီး နောက်ရက်မှာ မေကြီး နဲ့အတူမထင်မှတ်တဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးပြုလုပ်လိုက်တဲ့ အေးချမ်းမိုး – Nyi Ma Lay
ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်ခြင်း(၁)နှစ်ပြည့်အလှူလုပ်ပြီး နောက်ရက်မှာ မေကြီး နဲ့အတူမထင်မှတ်တဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးပြုလုပ်လိုက်တဲ့ အေးချမ်းမိုး
ပရိသတ်ကြီးရေ အေးချမ်းမိုးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတဲ့ ပရိသတ် အချစ်တော် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က အေးချမ်းမိုး ကတော့ သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်ခြင်း (၁)နှစ်ပြည့် အတွက် ဆွမ်းကပ် အလှူလေး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မြတ်နိုးရတဲ့ ဆံပင် ကိုလည်း ဖြတ် လှူဒါန်း ခဲ့တဲ့ အလှူလေး ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာ ကနေ မျှဝေ ဖော်ပြ လာခဲ့ပါတယ်။
အခုလည်း ဆရာ​လေး ဝဏ္ဏသိင်္ဂီအဖြစ် ၇ ရက်တာ သာသနာ့​ဘောင်ထဲ ဝင်​ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်. 🙏ဖခင်ကြီး ရာသက်ပန် ထွက်ခွာသွားခြင်း ၁နှစ်ပြည့်အလှူလုပ်ပြီး ​နောက်ရက်မှာ ​မေကြီးနဲ့အတူ ​ကောင်းမှူကုသိုလ်​​တွေ ပိုလုပ်နိုင်ဖို့ စဉ်းစားပြီး သီလရှင် ဝတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ် ☺️
၇ရက်အတွင်း ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ဗုဒ္ဓစာ​ပေ​တွေ…ကုသိုလ် အကုသိုလ်​အ​ကျိုးတရားတွေ …ပုထုဇဉ်လူသားပဲ ဒီ​လောက်​တော့ ရှိမှာ​ပေါ့ဆိုပြီး ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ​​လောဘ၊ ​ဒေါသ၊ ​မောဟ​တွေ…မ​ပြောပ​လောက်​ပေမယ့် အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာ သိလာရတဲ့အရာ​တွေက ​ရှေ့သံသရာအတွက် ဘယ်လို ဆက်ပြီး ရှင်သန်သွားရမယ်ဆိုတာ သိလာခဲ့ရပါတယ်…အထူးသဖြင့်​တော့ လူဖြစ်လာရခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်လုပ်ဖို့…​မေတ္တာဘာဝနာ ပွားများဖို့ဆိုတာ​တွေက ၇ရက်အတွင်းဆို​ပေမယ့် သိပ်ကို တန်ဖိုးရှိတာပါပဲ 🙏
ဆရာ​လေးအဖြစ် ၇ရက်အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်​တွေနဲ့ ပွားများခဲ့တဲ့ ​မေတ္တာဘာဝနာ​တွေကို ချစ်သူခင်သူ​တွေ ထပ်တူ ထပ်မျှ ရရှိ​စေဖို့ အမျှ​ပေး​ဝေပါတယ်…အမျှ…အမျှ…အမျှ 🙏🙏🙏ဆိုပြီး မွန်မြတ်လှတဲ့ သာသနာ့ဘောင်ထဲ ဝင်နိုင် ခဲ့ပြီး ကုသိုလ်လေး တွေကို မျှဝေထား ခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေအးခ်မ္းမိုးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္ အခ်စ္ေတာ္ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က ေအးခ်မ္းမိုး ကေတာ့ သူ႔ရဲ့ဖခင္ႀကီး ကြယ္လြန္ျခင္း (၁)ႏွစ္ျပည့္ အတြက္ ဆြမ္းကပ္ အလႉေလး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမတ္နိုးရတဲ့ ဆံပင္ ကိုလည္း ျဖတ္ လႉဒါန္း ခဲ့တဲ့ အလႉေလး ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သူ႔ရဲ့လူမႈ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ ကေန မၽွေဝ ေဖာ္ၿပ လာခဲ့ပါတယ္။
အခုလည္း ဆရာ​ေလး ဝဏၰသိဂႌအျဖစ္ ၇ ရက္တာ သာသနာ့​ေဘာင္ထဲ ဝင္​ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္. 🙏ဖခင္ႀကီး ရာသက္ပန္ ထြက္ခြာသြားျခင္း ၁ႏွစ္ျပည့္အလႉလုပ္ၿပီး ​ေနာက္ရက္မွာ ​ေမႀကီးနဲ႔အတူ ​ေကာင္းမႉကုသိုလ္​​ေတြ ပိုလုပ္နိုင္ဖို႔ စဥ္းစားၿပီး သီလရွင္ ဝတ္ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္ ☺️
၇ရက္အတြင္း ဖတ္ခဲ့ရတဲ့ ဗုဒၶစာ​ေပ​ေတြ…ကုသိုလ္ အကုသိုလ္​အ​က်ိဳးတရားေတြ …ပုထုဇဥ္လူသားပဲ ဒီ​ေလာက္​ေတာ့ ရွိမွာ​ေပါ့ဆိုၿပီး ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ​​ေလာဘ၊ ​ေဒါသ၊ ​ေမာဟ​ေတြ…မ​ေျပာပ​ေလာက္​ေပမယ့္ အျပစ္ရွိတယ္ဆိုတာ သိလာရတဲ့အရာ​ေတြက ​ေရွ႕သံသရာအတြက္ ဘယ္လို ဆက္ၿပီး ရွင္သန္သြားရမယ္ဆိုတာ သိလာခဲ့ရပါတယ္…အထူးသျဖင့္​ေတာ့ လူျဖစ္လာရျခင္းရဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ကုသိုလ္လုပ္ဖို႔…​ေမတၱာဘာဝနာ ပြားမ်ားဖို႔ဆိုတာ​ေတြက ၇ရက္အတြင္းဆို​ေပမယ့္ သိပ္ကို တန္ဖိုးရွိတာပါပဲ 🙏
ဆရာ​ေလးအျဖစ္ ၇ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္​ေတြနဲ႔ ပြားမ်ားခဲ့တဲ့ ​ေမတၱာဘာဝနာ​ေတြကို ခ်စ္သူခင္သူ​ေတြ ထပ္တူ ထပ္မၽွ ရရွိ​ေစဖို႔ အမၽွ​ေပး​ေဝပါတယ္…
အမၽွ…အမၽွ…အမၽွ 🙏🙏🙏ဆိုၿပီး မြန္ျမတ္လွတဲ့ သာသနာ့ေဘာင္ထဲ ဝင္နိုင္ ခဲ့ၿပီး ကုသိုလ္ေလး ေတြကို မၽွေဝထား ခဲ့တာ ပဲျဖစ္ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ။
Previous post ဆရာဖြစ်သူဆီကို Video Call ကနေတဆင့် သတိတရနဲ့ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်ကြောင့်ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေတဲ့ ဂျွန်လွင်
Next post မပျော်ရွှင်ရတဲ့ သူ့မွေးနေ့ကိုအချစ်ရဆုံးသောအမျိုးသမီးဆောင်းနဲ့ မောင်လေးပိုင်တံခွန်တို့က မထင်မှတ်ဘဲ ပျော်အောင်လုပ်ပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့ မေချစ်သွေး